पुनःनिर्माण – Page4– Halkaro
चुनावी एजेण्डामा अटाएनन् भूकम्प पीडितका समस्या
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न आश्वासन बाँड्दै हिँडेका मकवानपुरका राजनीतिक दलले भूकम्पपीडितको एजेन्डा भने समावेश गरेका छैनन् । १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावितमध्ये मकवानपुर पनि हो । पीडितहरु हालसम्म अस्थायी टहरा र त्रिपालमै गुजारा गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक एजेन्डाकै भरमा राजनीतिक दलहरु मत माग्दै घरदैलो गरिरहेका छन् । २० हजार बढी […]
भूकम्पको दुर्इ वर्ष, तीन सरकार तर पीडितको टहरामै बास
काठमाडौँ । दुई वर्षको अवधिमा तीन पार्टीका तीन प्रमुख नेताले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ९० प्रतिशत भूकम्पपीडितको बास अहिले पनि टहरामै छ । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण […]
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारले खटाएका प्राविधिक फिल्डमा जान अटेर गरेकाले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणमा समस्या परेको जनाएको छ । जसका कारण दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान लिने पीडितको संख्या कम भएको उसको भनाइ छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २९ चैतसम्ममा पाँच लाख ४२ हजार नौ सय ६३ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिएका छन् । तर दोस्रो […]
पुनःनिर्माणमा खेलवाडः २८ अर्बमा ४२० घर !
प्रकाशित मिति : २०७४, ३ बैशाख आईतवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, गैरसरकारी संस्थामार्फत वितरित अनुदानबाट मात्र चार सय २० भूकम्पपीडितले घर निर्माण सकेर छानो लगाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसा प्राधिकरणको २४ चैतसम्मको विवरणमा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा मात्रै गैरसरकारी संस्थाको […]
काठमाडौँ । भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब पाँच लाख ४५ हजार भूकम्प पीडितमध्ये अनुदान पाएर पनि पाँच लाखले घर बनाउन नै थालेका छैनन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरे पनि ४५ हजारले मात्र घर बनाउन सुरू गरेका छन् । बाँकी पाँच लाख लाभग्राहीले किन घर बनाउन नथालेका हुन् […]
घर बनाइसकेका २४ घरधनीलार्इ तेस्रो किस्ता
गोरखा । घर बनाइसकेका जिल्लाका २४ भूकम्प पीडितलार्इ तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका ७० हजारवटा नयाँ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्प गएको दुई वर्ष हुनै लाग्दा मसेलका पाँच र पन्द्रुङका १९ घरको मात्रै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला विकास कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार यी […]
१७ जिल्लाको भूकम्प पीडितले बल्ल पाउने भए घर बनाउन अनुदान
काठमाडौँ । भूकम्पबाट तुलनात्मक रूपमा कम क्षति पुगेका १७ जिल्लाका पीडितले पनि अब पहिलो किस्तास्वरूप घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार पहिलो चरणमा १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ घरधुरीलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न लागिएको हो । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा जस्तै […]
विश्व सम्प्दा सूचीमा सूचिकृत सम्पदा खतरामा
प्रकाशित मिति : २०७३, १२ चैत्र शनिबार
काठमाडौँ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइले नेपालका विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (युनेस्को)ले सूचीमा रहेका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम रहेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका सम्पदाबारे अनुगमन गर्न युनेस्कोको एक […]
लाप्राकमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गोरखाको लाप्राकमा नमूना बस्ती निर्माण गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई स्वीकृति दिएको छ । अाजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार प्राधिकरण अन्तर्गतको भूकम्पप्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिको बिहीबारको बैठकले भूकम्पप्रतिरोधी घरको नक्साको डिजाइन थप परिमार्जन गर्ने सर्तमा सङ्घलाई नमूना बस्ती निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको […]
तीन लाखमा बन्ने छ भूकम्प प्रतिरोधी घर
प्रकाशित मिति : २०७३, ९ चैत्र बुधबार
काठमाडौँ । सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँमा घर नबन्ने चिन्तामा रहेका भूकम्पपीडितलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खुसीको खबर दिएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको नयाँ डिजाइनको घर भूकम्पपीडितले दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमै तोकेको मापदण्डअनुसार बनाउन सक्नेछन् । प्राधिकरणले पक्की घरको ६ वटा नयाँ डिजाइन स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा डिजाइनमा दुईकोठे पक्की भवन तीन […]